Italiana lehilahy sy ny fomba daty azy Iraisam-pirenena ny Fitiavana
Ny Italiana dia miavonavona ny olona ary na lahy na vavy hahafantatra ny fomba akanjo ambony indrindra fiantraikany ho an’ny fotoana rehetra — eo an-toerana mpamorona dia eo anivon izao tontolo izao ny tsara indrindra. Suave sy mendrika, ny manan-tsaina toe-tsaina ny toerana ambony ao amin’ny lisitra tsara ny lahy. Nahita fianarana tsara ary matetika manana tsara ny asa, ny italiana stallion, dia hitondra fitiavana sy ny hehy ho ny fifandraisana. Na izany aza, noho ny teny fototarazo, izy ireo dia afaka ny ho afo sy haingana ny toe-pihetseham-pontsika, dia hamaha ny olana eo amin’ny resaka fotoana, sy ny fandriampahalemana sy ny filaminana dia miverina amin’ny rivo-piainana. Ny fomba fiainana milamina, sy ny ‘amore’ dia fototry ny piainana rehetra Italiana. Izy ireo no lehibe mpahandro sy ny lehibe, tompon’ny maro, sy ny fianakaviany mifantoka fomban-drazana hanomezana azy ireo ny fahaizany momba ny fanaovana ny olon-drehetra mahatsiaro ao an-trano. Toy ny rehetra, Latinos, feno fitiavana sy mahalala tsara ny zavatra izy ireo te. Raha mitoetra ho amin’ny fanapahan-kevitra sy ny tsy miankina, ny italiana ny olona ho tia sy mandala ny mpiara-miasa ary manao azo antoka fa ny fifandraisana izao manaraka izao ny malama ny lalana ho amin’ny fahombiazana. Ankehitriny Italia dia nahita ny mampiavaka ny anjara toeran’ny lahy sy ny vavy levona ka very ny hery, ny lehilahy sy ny vehivavy ny mahalala sy mankasitraka fa ny fiaraha-miasa eo amin’ny lahy sy ny vavy dia tena ilaina amin’ny fikojakojana tsara ny fifandraisana. Ny fivavahana dia ampahany manan-danja ny kolontsaina sy ny maro, raha tsy ny ankamaroan’ny, ny mino An’andriamanitra. Ny fanambadiana dia tena ara-dalàna amin’ity firenena ity, ary ny olona ny fanajana ny fomban-drazana sy ny kolontsaina, ary miezaka ny mandresy lahatra azy ireo mankany amin’ny alitara. Noho izany, na ianao italiana, ny Amerikana, na hafa zom-pirenena, raha miaraka aminao ny olona iray avy any Italia, ho vonona ho amin’ny fiaraha-miasa mba hitondra mankany amin’ny fanambadiana. Ny fanabeazana ao Italia dia ny-ny-ny daty sy ny ankehitriny, ary ny tena Italiana, lahy sy vavy, no mandray soa avy amin’io rafitra. Ny olona ny fitiavana ny lamaody dia midika hoe ireo mahafantatra ny fomba akanjo mba hijery ny tsara indrindra — mangatsiaka, ny tsara tarehy sy ny stylish, ny lehilahy sy ny vehivavy, izy roa. Ny Italiana ny kolontsaina sy ny mafana italiana toetr’andro mamela azy ireo ho tia ny fiainany ho amin’ny max ao amin’ny mivaky loha tony rivotra iainana. Isaky ny tanan-dehibe, ny tanàna sy ny vohitra, ny mponina ao an-toerana no mandany fotoana be dia be ao amin’ny mavitrika trano fisotroana kafe, matetika nivoaka avy teo amin’ny pavements ny mijery ny mpandalo-by. Efa nahita ny tsara, lehilahy tsara fanahy? Raha izany, tonga soa eto amin’ny tontolo hafa tanteraka ny iray fantatrao avy amin’ny fiarahana amin’ny Tandrefana ny olona. Isaky ny zom-pirenena sy ny kolontsaina manana ny azy manokana ny fiovana, tsara ny sasany, ny sasany ratsy, eny, na dia ny tsara fahiny American stereotype dia miampy sy miiba hevitra. Noho izany, inona no tena toetra mampiavaka ny ry zalahy avy amin’ny tsara tarehy ity elongated firenena. Italia no afovoany-salantsalany firenena, manan-karena amin’ny kolontsaina, ary mihantona ny tongony tahaka ny avy amin’ny faritra atsimon’i Eoropa.
Araka ny voalazako teo aloha, Italiana love fashion, izay mety ho nahatsikaritra eo saika isaky ny kihon, indrindra fa ao Milan. Izy ireo ihany koa ny fitiavana ny teatra, ny fety, ny zavakanto, ary ho lehibe ny sakafo — Mediterane nahandro — ny iray amin’ireo antony mahatonga azy ireo matetika ao toy izany ny fahasalamana tsara. Maro ireo tokan-tena Tandrefana vehivavy amim-pifaliana ny fifanakalozana an-trano-lehibe rehetra-Amerikana ho an’ny lehilahy italiana Casanova.
Ny antony dia tsotra sy ny tsara fantatra rehetra italiana vehivavy: ny olona avy amin’ny tsara tarehy io, talaky masoandro firenena tia ny fiainana sy ny miaina izany, ny fanomezana azy ireo ny zava-drehetra ao amin’ny tsirairay sy ny toe-javatra rehetra. Ary ny vehivavy avy any Etazonia dia ho faly ny mahafantatra fa, noho ny fanabeazana tsara, indrindra italiana stallions afaka miteny fiteny maro, anisan’izany ny malagasy. Noho izany, rehefa mivoaka miaraka aminy eo-zava-dehibe rehetra daty voalohany, afaka ny ho azo antoka fa tsy ho maro mahaliana fifanakalozan-dresaka ao ambadiky ny tsara tsiky mamiratra. Ny sakafo dia tsy ilaina, izany ihany koa ny mametraka sy mandrindra ny fifandraisana eo amin’ny fianakaviana sy ny namana, na tsia ny anarana lehilahy tokan-tena. Na iza na iza miditra italiana ny lehilahy ao an-trano dia, tsy misy tsy, handray ny fanatitra ny sakafo na zava-pisotro, sy ny ara-dalàna roa. Araka ny mahazatra, ny sakafo maraina dia ahitana ny mofo horonan-taratasy, dibera, matanjaka kafe sy voankazo na ranom-boankazo. Fomba nentim-paharazana, ny lehibe ny sakafo atoandro dia nanompo ho amin’ny mitataovovonana sakafo, ary ny paty, dia amin’ny ankapobeny dia ampahany amin’ny sakafo amin’ny faritra rehetra, miaraka amin’ny lasopy, mofo, ary angamba hena na trondro na.
Sakafo hariva nizara ny sisa tavela
Vao tsy ela izay, ny fianakaviana mitady mba hahita ny sakafo hariva ho toy ny tena sakafo fianakaviana. Ny fomba amam-panao ny siesta dia ny fanovana sy ny mavesatra sakafo antoandro intsony mety ho azo ampiharina. Misy fahasamihafana isam-paritra ao ny zavatra hanina sy ny sakafo dia vonona. Amin’ny ankapobeny, maro veal dia ho levona ny tany avaratra, izay sakafo mirona ho maivana kokoa. Southern mahandro sakafo manana ny lazany ho mavesatra kokoa sy betsaka kokoa noho ny avaratry ny fandrahoan-tsakafo. Misy sakafo manokana noho ny toe-javatra isan-karazany. Ohatra, misy manokana Saint Joseph ny mofo, ny Paska mofo mafy-nahandro atody, Saint Lucy ‘ny mason’ ny andro firavoravoana, ary ny andro firavoravoana amin’ny Fito Hazandrano nandritra ny fankalazana ny faran’ny Taona. Divay dia ny fahazarana sy ny niara-nanompo tamin’ny rehetra ny sakafo — noho izany ianao raha latsa-pitia amin’ny lehilahy iray avy any Italia, ataovy azo antoka fa ianao koa dia tia divay. Ny kilasy sy ny sokajin’olona ao Italia, Misy fahasamihafana be dia be ao ny harena eo amin’ny avaratra sy ny atsimo. Misy ihany koa ny mahazatra ny ara-tsosialy ny fampianarana izay hita ao amin’ny orinasa fiaraha-monina. Italia no manana ny ambony ny tahan’ny tsy fananana asa, sy ny fahasamihafana eo amin’ny manan-karena sy ny mahantra dia fitarainana, raha ny vaovao mpifindra monina dia miavaka izy ireo, satria avy amin’ny firenena mahantra. Ny governemanta ampiasaina mba hihazonana ny be fiahiana ara-tsosialy tambajotra izay efa nanapaka tao anatin’ny taona vitsivitsy, mba hifanaraka amin’ny fepetra takiana amin’ny Vondrona Eoropeana. Ireo fampihenana ny tetibola efa lavo ny mahantra strata ny fiaraha-monina. Fizarana ny Asa amin’ny lahy sy ny Vavy. Fomba nentim-paharazana, ny italiana lehilahy iray no nivoaka ny asa sy ny vehivavy nandray ny fikarakarana ny tokantrano. Taorian’ny Ady lehibe faha-II, izay fandaharana niova haingana dia haingana. Raha taloha ny fiheverana fanavakavahana ny lahy sy ny vavy sy ny lahy fahefana hanjaka ao ny sasany faritra ambanivohitra, italiana vehivavy no malaza noho ny fahaleovan-tena, marina tokoa fa maro anthropological sy ara-miasa mariho fa nihevitra ny lasa hiérarchique dia matetika overstated. Amin’izao fotoana izao, ny vehivavy dia mandray anjara amin’ny lafiny rehetra ara-politika, ara-toekarena, ary ny ny fiainana ara-tsosialy. Ny vehivavy hitovy eo ambanin’ny lalàna sy hanatrika ny oniversite sy ny asa ny asa hery tamin’ny isa mifanaraka amin’ny ireo anjara ny vahoaka. Mariky ny vehivavy ny fahaleovantena Italia ny ratsy dia ny fitomboan’ny mponina. Izany no marina, na dia izany aza, fa ny ankizivavy mbola hanao betsaka toy izany koa ao an-toerana ny asa nataony taloha, na dia mihevitra ho manana andraikitra vaovao. Ny Mikasika ny Satan’ny vehivavy sy ny lehilahy. Amin’ny teny italiana ny kolontsaina, ny olona dia nomena preferential sata sy ny fitsaboana. Ny vehivavy no voatendry ny toerana misy ny ‘fanahy’ ny fianakaviana, raha ny lehilahy no ‘mpitarika.’ Olona ireo mba hanohanana sy hiaro ny fianakaviana raha vehivavy dia atsangana ny zaza, ary nitandrina ny tenany ho madio fitondrantena, mba tsy ho henatra ny fianakaviana. Amin’izao fotoana izao, ny zava-drehetra dia samy hafa, ary ny fahiny ny miralenta tsy mitana na inona na inona anjara amin’ny fiaraha-monina ankehitriny. Ny vavy amin’ny ankapobeny foana nanana fahefana bebe kokoa noho izy ireo, ny fomba nentim-paharazana tokony hanana. Ireo andro, italiana ny vehivavy dia matetika no heverina ho tena mahazo vahana ao Eoropa.
Ao ny lasa, ny fanambadiana dia namboarina, ary ny vehivavy nitondra fanomezana ho any amin’ny fifandraisana. Na izany aza, misy ireo an-kolaka ny fomba izay zanakalahy sy zanakavavy dia afaka mandona ny ray aman-dreny any an-fandaharana betrothal ny olona tsara. Ny mahantra kilasy, raha ny marina, nanana fahafahana bebe kokoa amin’ny fifantenana noho ny manankarena ireo. Dowries mety ho nanofahofa ary matetika ireo. Amin’izao fotoana izao, ny fanambadiana dia toy ny maimaim-poana toy ny hafa na aiza na aiza eto amin’izao tontolo izao, ary afa-tsy ho an’ireo izay miditra ny mpitondra fivavahana, no saika ny rehetra Italiana hanambady. Misy, na izany aza, mbola ny fomba amam-panao amin’ny tany maro ny fianakaviana ho an’ny ankizy iray mba hitoetra tsy manam-bady noho izany izy dia afaka mba hikarakarana ny be taona ny ray aman-dreny. Ny fisaraham-panambadiana dia voarara vao haingana. Misy be dia be ny misy vaovao momba ny olona avy any Italia, ny sasany dia tsara sy sasany angamba feo kely mampatahotra. Fa tahaka ny amin’ny mandrakariva, ny tsara indrindra, sy ao amin’ny zava-misy, ny hany fomba fijery, dia tokony ho tonga avy amin’ny zavatra niainako manokana, satria ny tsirairay no samy hafa. Na aiza na aiza misy anao hijery, ary ao amin’ny firenena whichever, ianao manana ny fahafahana hahita fa knight amin’ny fiadiana mamirapiratra, fa misy ihany koa ny fahafahana hahita ny knave. Raha toa ka tsy italiana, ataovy ao an-tsaina fa ny fiarahana ivelan’ny ny fenitra ara-kolontsaina dia mitaky fanitsiana ny sasany. Izany dia afaka ny ho iray mahatahotra lalana, fa izany koa dia mitaky anao mba hahatakatra fa tsy ho afaka ny hanova azy tokony ho sosotra noho ny toetra izay tena latsa-paka lalina any amin’ny ny maha-izy azy. Na dia ireo hevitra raiki-tampisaka ireo matetika no marina ny sasany mari-pahaizana, aza adino fa ny olona rehetra dia tsy manam-paharoa, ary tsy tokony hanana fanantenana na ny fitakian ny olona iray fotsiny, satria izy ireo hamantatra ho ampahany amin’ny vondrona sasany. Raha tsorina dia, raha toa ka manapa-kevitra tianao ny daty italiana olona ihany ianao satria tia ny pizza sy ny paty sy ny fanantenana ny fianakaviana dia tahaka ny nandatsaka Ny Sopranos, ho vonona fa mety ho diso fanantenana. Tsy azo antoka ny momba ny fiarahana ry zalahy ireo. Afaka miezaka foana mba hahita ny nofy mpiara-miasa toeran-kafa. Ahoana ny momba ny bandy avy any Frantsa, Aostralia, Espaina, na ny Repoblika Czech
← Ny Mahatsara sy Maharatsy ny mifampiresaka ao amin'ny Fiarahana amin'ny any Ivelany Girl